၎င်းသည်အားလုံးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောကုဒ်လော? er ... အကြောင်းအရာ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 15, 2009 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2015 Lorraine ဘောလုံး
ကျွန်ုပ်သည်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကငါ့ရဲ့အိမ်ရှင်လိုနည်းပညာဝိဇ္ဇာဆရာတွေအများကြီးကိုအချိန်ပေးတယ်။ Douglas Karr။ ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်ပရိုဂရမ်မာများထံမှသင်ယူခဲ့ရသောအရေးကြီးဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ခုမှာပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောကုဒ်၏တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတိုင်းကသူတို့ဟာထူးခြားတယ်လို့ထင်ချင်ကြပေမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဖို့သင်ရေးတဲ့ code ကိုတစ်ချိန်ကသူဖောက်သည်တစ် ဦး ထက်ပိုသောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ကုဒ်ကိုသုံးနိုင်လိမ့်မည်ဟုသူကရှင်းပြသည်။
၏တူညီသောအယူအဆ ပြန်သုံးနိုင်သောကုဒ် စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအပါအ ၀ င်ကွဲပြားသောအခြေအနေများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ် (သို့) ၀ ဘ်ဆိုဒ်အတွက်အကြောင်းအရာအသစ်တွေရေးဖို့အချိန်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အလုပ်များတဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာ၊ ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ကုဒ်ရဲ့ယုတ္တိဗေဒကိုဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲဆိုတာသူတို့ကိုငါပြတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် - ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်ကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ပေးပို့သောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များသို့မဟုတ်အီးမေးလ်များသည်သတင်းလွှာများ၊ ဘလော့ဂ်ပို့စ်များနှင့်တွစ်တာများဖြစ်သည်။ ဘီးကိုပြန်လည်ဆန်းသစ်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်? ကုဒ်? သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်ရန်အကြောင်းအရာသည်ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်သတင်းလွှာပရိသတ်အတွက်အနည်းငယ်ညှိရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်သင်အုတ်မြစ်ချသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျန်သည်လွယ်ကူသည်။
ထိုအခါငါအဘို့, လွယ်ကူသောသော့ချက်စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာရေးဆရာသို့မဟုတ်ဘလော့ဂါတစ်ယောက်မဟုတ်လျှင်၊ ဒီကိရိယာများ၊ WordPress, တွစ်တာ, ပလောင်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဆုံးသတ်ဖို့နည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ သင်၏ကုန်ပစ္စည်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်စိတ် ၀ င်စားမှုတိုးပွားစေပါ။ ထိုရည်မှန်းချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍၊ ကျွန်ုပ်၏အဖွဲ့သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ဘလော့ဂ်သစ်ကိရိယာများကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်တိုင်းတစ်စုံတစ်ယောက်သည်အသစ်တစ်ခုကိုလွှင့်တင်ပုံရသည်။ အခုငါ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကြသည် TweetDeck နှင့် နောက်တစ်ခေါက်.
TweetDeck ? ကျွန်ုပ်တို့သည် client account များစွာအတွက်အကြောင်းအရာများကိုစီမံခန့်ခွဲသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်အဆက်အသွယ်အုပ်စုများသို့မဟုတ် client တစ်ခုချင်းစီအတွက်စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားအသုံးပြုသူများမှအသုံးပြုသူသို့အချိန်မှန်ဆက်သွယ်မှုများအတွက်အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သည်။
၎င်းသည်တွစ်တာတွင်အမြဲတမ်းကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပုံစံဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်နေရာတိုင်း၌တစ်ပြိုင်နက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် TweetLater ကိုမှီ။ ကျွန်ုပ်ထိုအရပ်၌ရှိမနေသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏မြင်သာမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွစ်တာအကောင့်အတွက်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်မသုံးပါ၊ သို့သော်ပုံမှန်ကြေငြာချက်များနှင့်လူတန်းစားမွမ်းမံမှုများရှိသောလေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့သောဖောက်သည်များအတွက်အလွန်အံ့သြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင်အလုပ်သင်အဖြစ်တာ ၀ န်ယူရန်အတွက်စက်တင်ဘာလကုန်အထိနေ့စဉ်တွစ်များကိုစီစဉ်ထားသည်။ ငါအချိန်ပိုရသောအခါငါခုန်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် TweetLater ငါ့အဘို့လှုပ်ရှားမှုအခြေခံအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
နောက်ဆုံးအတွေးတစ်ခုမှာရွေးချယ်မှုအားလုံးနှင့်အတူလွှမ်းမိုးရန်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်တော့်အကြံပြုချက်ကအဲဒီအလုပ်တွေထဲကအနည်းငယ်ကိုရွေးပြီးကောင်းကောင်းသုံးပါ။ ရလဒ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်။